Umatshini womkhenkce wamanzi olwandle-iShenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd.
Umatshini womkhenkce wamanzi olwandle usetyenziswa kwisikhephe sokuloba.Inokwenza amanzi olwandle abe ngamaqhekezana omkhenkce anetyuwa ngokuthe ngqo.
Oomatshini bomkhenkce bamanzi olwandle benzelwe ngokukodwa ukwenziwa komkhenkce kwisikhephe sokuloba.Ziyi-100% ezichasene nokugqwala kwamanzi olwandle okanye umoya wolwandle.
Abaqulunqi babo kufuneka balumke ngokwaneleyo ukuze bayenze icwecwe kangangoko kunokwenzeka ukuze ilungele indawo encinci kwisikhephe sokuloba.
Uluhlu lwamandla omatshini bomkhenkce owenziwe ngamanzi olwandle lusuka kwi-1T/ngosuku ukuya kwi-20T/ngosuku.
Umthamo wemveliso yomkhenkce
1T/mini amanzi olwandle flake umatshini ice
Iitoni ezi-1 ngeeyure ezingama-24
3T / imini yolwandle umatshini ice flake ice
Iitoni ezi-3 ngeeyure ezingama-24
5T/mini amanzi olwandle umatshini ice flake ice
Iitoni ezi-5 ngeeyure ezingama-24
10T/mini amanzi olwandle umatshini ice flake ice
Iitoni ezili-10 ngeeyure ezingama-24
20T/mini amanzi olwandle umatshini ice flake ice
Iitoni ezingama-20 ngeeyure ezingama-24
Nazi iingenelo eziphambili zoomatshini bam bomkhenkce.
Yenzelwe ngokukodwa ukusebenza kwimeko yolwandle.
Icompressor ixhotyiswe ngetanki ekhethekileyo yeoli, kwaye ukujikeleza kweoyile yomatshini kugudileyo kwimeko yokushukuma kwisikhephe.
Icondenser yokupholisa amanzi olwandle yenziwe ngeetyhubhu ze-Alpaka, iziphelo zobhedu, kwaye iwachasa ngokupheleleyo amanzi olwandle.Amanzi olwandle apholileyo nasimahla aya kusetyenziswa njengeyona nto ifanelekileyo yokususa ubushushu kwicondenser.
Iziphelo zethusi zitshixiwe ngentsimbi ye-316 ngezikrufu.
Zonke iindawo ezithintana namanzi / iqhwa zenziwe ngensimbi engenasici 316. Yonke inkqubo i-100% i-anti-corrosive kumanzi olwandle / umoya wolwandle.
Ijenereyitha yomkhenkce ine-ice blade kunye ne-ice scraper.
I-ice blade inqumla i-ice layer ibe yi-flakes, kwaye emva koko i-ice scraper isusa ama-ice flakes kwi-ice generator.
I-ice blade kunye ne-ice scraper isebenza kunye kwaye ii-Ice flakes ziya kususwa nge-100% kwaye zonke ziwela kwigumbi lomkhenkce.
Umphezulu wokwenza umkhenkce we-Evaporator uyilwe ngemigca ye-Meridian kunye ne-Parallel.
Imigca iphucula ukusebenza kakuhle kokwenziwa komkhenkce, kwaye iluncedo kakhulu ekuvuneni komkhenkce.Bavumela i-ice scraper ukuba isuse yonke i-ice flakes.Onke amaqhekeza omkhenkce avunwa kakuhle kakhulu.
Uyilo olukrelekrele kakhulu lokwenziwa komkhenkce owenziwe ngamanzi olwandle.Inelungelo elilodwa lomenzi liqela lethu ukusukela ngo-2009.
Ukusebenza komkhenkce kumatshini wethu wamanzi olwandle ahlala kubhetele kunabanye oomatshini baseTshayina.
4. Umgangatho olungileyo kunye newaranti ende.
I-80% yamacandelo kumatshini wam we-ice flake ziimpawu ezidumileyo zamazwe ngamazwe.Ezifana ne-Marine type Bitzer compressor, i-Marine isebenzisa i-XMR condenser, i-Marine isebenzisa i-evaporator, njalo njalo.Iqela lethu lobuchwephesha kunye namava okuvelisa lisebenzisa ngokupheleleyo izinto ezilungileyo.
Oko kukuqinisekisa ukuba ukumgangatho olungileyo koomatshini bomkhenkce onomkhenkce osebenza kakuhle kakhulu.
Iwaranti yenkqubo yefriji yiminyaka engama-20.Ukuba ukusebenza kwesixokelelwano sesikhenkcezisi kuba kungaqhelekanga kwisithuba seminyaka engama-20, siya kuhlawulela ukulahlekelwa ngumsebenzisi.
Akukho gesi ivuzayo kwimibhobho kwiminyaka eyi-12.
Akukho zixhobo zesikhenkcisi ezidilikayo kwiminyaka eyi-12.Kubandakanya icompressor/condenser/evaporator/ivalve zokwandisa....
Iwaranti yeendawo ezihambayo, ezifana nemoto / impompo / iibheringi / iindawo zombane, yiminyaka emi-2.
5. Ixesha lokuhambisa ngokukhawuleza.
Umzi-mveliso wam ngowona mkhulu eTshayina ozele ngabasebenzi abanamava.
Asifuni ngaphezulu kweentsuku ezingama-20 ukwenza oomatshini bomkhenkce abancinci babencinci kune-20T / ngosuku.
Asifuni ngaphezulu kweentsuku ezingama-30 ukwenza oomatshini bomkhenkce ovuthekileyo phakathi kwe-20T/ngosuku ukuya kuma-40T/ngosuku.
Ixesha lokwenziwa komatshini omnye kunye noomatshini abaninzi bayafana.
Umthengi akayi kulinda ixesha elide ukuze afumane oomatshini be-ice flake emva kwentlawulo.